Archive du 20180309
Marc Ravalomanana Manomana paikady …
Ny orinasany akatona, ny tenany hitadiavana hevitra andro aman’alina mba tsy ho afaka mirotsaka hofidiana filoham-pirenena.Niakatra ho 2 ny isan’ny omby maty ao amin’ny AAA Tiko Andranomanelatra. Hita ho tena miha mafy ny antsojay atao amin’i Marc Ravalomanana sy izay rehetra mifampikasokasoka aminy
Rivo Rakotovao Manomboka mankaleo ny HVM sasany
Tena mba ahoana ny mason-tsivana raisin`ny filoham-pirenena,Hery Rajaonarimampianina, rehefa misafidy ireo olona hiasa hiaraka aminy ? Miseho ho babany avokoa mantsy izay tonga ao.
Politika sy raharaham-pirenena Mbola tompon’ny ketrika Ratsirahonana
Fanta-daza sy havanana amin’ny resaka kajikajy mikasika ny lalàna mifamatotra amin’ny politika eto amin’ny firenena i Norbert Lala Ratsirahonana ary nitety ny vanim-potoana mihitsy. Hita foana ary ampiasain’ny mpitondra hatrany amin’ny fanamarinan-toerana azy amin’ny alalan’ny lalàna isan-karazany.
Vehivavy MFM Ny fanabeazana no fototry ny fampandrosoana
“Arakaraka ny toerana misy azy no tokony hanehoany ny maha izy ny vehivavy ka handraisany anjara amin'ny fampandrosoana ny manodidina azy”, hoy i Malalatiana Rasoaniaina nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy tetsy Antaninarenina omaly.
Vehivavy Malagasy Manomboka miditra lalina amin’ny politika
Ny fikambanam-behivavy Sambatsy avy any amin’ny faritr’i Melaky no nandrombaka ny laharana voalohany ka nahazo ny lelavola 20 tapitrisa ariary tamin’ilay fifaninanana “Vehivavy mizaka tena ara-toekarena” nokarakarain’ny minisiteran’ny mponina.
Lalao Ravalomanana “Tsy ekena intsony ny herisetra…”
Tsy lavabe nefa nafonja ny kabarin’ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana, tetsy amin’ny lapan’ny tanàna nandritry ny fanokafana ny fankalazana ny andron’ny vehivavy omaly.
Firenena Malagasy Tompondaka amin’ny atrikasa
Raha nisy ny amboara manokana ho an’izay firenena be atrikasa sy fikaonandoha indrindra eto ambonin’ny tany dia voalohany na faharoa i Madagasikara tao anatin’izay 4 taona nisesy izay. Tato anatin’ny 2 taona farany aza efa nanomboka nitsikera matetika mihitsy ny mpikirakira vaovao hoe hitondra mankaiza marina ireo atrikasa ireo ?
Lapan’ny fitsarana Anosy Hanahirana indray ny fikarakarana taratasy
Vao mainka hihamafy ny olana hahazo ireo mpikarakara taratasy tonga manatona ny fitsarana Anosy manomboka anio zoma. Hanatanteraka fitokonana fanairana manomboka anio indray mantsy ny sendikan’ny mpitsara izay mivondrona ao anatin’ny SSM hanairana ny fitondram-panjakana ao anatin’ny torimasony.
Soavimasoandro Tovolahy iray maty novonoin’ny adala
Tovolahy iray antsoina hoe Tiavina Angelo, izay vao 20 taona no maty vokatry ny tsindron’antsy nahazo azy teny Soavimasoandro omaly tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany tolakandro.
Fokontany Tsarahasina Belazao Nahazo 8.781.000 ar avy amin’ny Mada Braizh
Tafaverina an-tanindrazana avy nanatanteraka asa “Bénévolat”nandritra ny tapa-bolana tany Kimpeeley any Frantsa misy ny foibe toeran’ny fikambanana Mada Braizh tarihan’i Guy Doville ny depiote Randrianantenaina José izay solontenany eto Madagasikara
Kianja Malacam Antanimena Hangotraka ireo 1/2-dalan’ny Coupe d’Analamanga
Seksion’ny baolina kitra Antananarivo-Renivohitra Raikitra ny fiadiana ny ho tompondaka samihafa
Hanomboka amin’ny sabotsy 10 martsa izao eny amin’ny kianjan’i Bevalala ambony sy eny amin’ny kianja Bevalala ambany ary eny amin’ny kianja Masera Bourbond Androhibe ireo fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’ny seksion’Antananarivo-Renivohitra.
Tobim-piantsonana Andohatapenaka Tsy mbola mihatra ilay saran-dalana tokana
Mbola betsaka ireo kipitson-javatra nampanantenain’ny fitondram-panjakana tsy mbola tanteraka hatreto eny amin’ny tobim-piantsonana vaovao eny Andohatapenaka. Anisan’ireny ilay fametrahana ny ivon-oerana fitakiam-bola ho an’ny saran-dalana tokana iarahan’ny koperativa rehetra.
« LES NUITS D’INCUBONS » Adihevitra arahin-kira entina hanatsarana ny fiainam-pirenena
Hanatanteraka adihevitra arahin-kira miaraka amin’i Dama ry zareo mpikarakara hetsika ao amin’ny “Maison Jean Laborde” etsy Andohalo anio zoma 9 martsa hariva.